मैले गैरसरकारी अस्पतालबाट सेवा दिन मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव – Health Post Nepal
२०७५ पुष २१ गते १७:४९
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूले कुनै नीजि वा सामुदायिक अस्पतालमा गएर सेवा दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
बिपी सामुदायिक अस्पतालको ११औँ वार्षिक साधारण सभालाई संवोधन गर्ने क्रममा उनले आफू गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएकोले धेरै कुराको परम्परा, पद्धति बसाल्ने दायित्व पनि आफ्नै भएको भन्दै आफूले जथाभावी गएर काम गर्न नमिल्ने बताए ।
‘म पहिलो राष्ट्रपति हुँ, परम्परा बनाउँने दायित्व पनि हो, भावनाले तानिएर आएँ, तर काम गर्न मिल्दैन्’ उनले भने ।
कार्यक्रममा विभिन्न वक्तहरुलाई कम्तिमा एक घण्टा चिकित्सक पूर्व राष्ट्रपतिलाई अस्पताल आएर सेवा दिन आग्रह गरेका थिए । कतिपयले यादवलाई चिकित्सा पेशामा फर्किन सल्लाह दिइरहेको सन्दर्भमा डा. यादवको यस्तो भनाई आएको हो । यसको जवाफमा उनले आफूले चिकित्सा पेशा अभ्यास नगरेको तीन दशकभन्दा बढी समय भइसकेको भन्दै अहिले प्रविधिमा पनि धेरै परिवर्तन आएको सुनाए ।
‘म राष्ट्रपति हुँदा पनि सरकारी अस्पतालमा जाँच गराउँथे, यहाँ आएर सेवा दिए आफ्नै नेताको अस्पतालमा गएर बस्यो भन्छन् मेरो बाध्यता बुभिदिनुस् ।’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका डा. यादवले आफनै समयमा उपस्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पताल स्थापनाको काम सुरु भएको समेत सुनाए । उनले पहिलोपटक ठूलो आन्द्राको क्यान्सर आशंका हुँदा चिकित्सककै सल्लाहमा जापान जानुपरेको र दोस्रोपटक प्रोष्टेट क्यान्सर हुँदा रोवटिक सर्जरीका लागि अमेरिका जान परेको बताए ।